सलाद, पकाएको समुद्री - धेरै पौष्टिक, स्वादिष्ट र स्वस्थ व्यञ्जन। कुनै अन्य पशु उत्पादन जस्तै समुद्री खाना भिटामिन, ट्रेस तत्व र पोषक मा धनी छन्। यी सलाद सुरक्षित "समुद्री" रूपमा कम क्यालोरी सामग्री, मान्छे वजन गर्न खोजिरहेका को आहार मा बनाउन सक्छ। सलाद लागि सामाग्री सामान्यतया माछा, व्यंग्य, केकडे र mussels पूर्ण तरकारी द्वारा complemented छन् जो छन्। तपाईं पनि केकडा लाठी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो केवल ताजी प्रयोग गर्न र पुन: चिसो बच्न महत्त्वपूर्ण छ।
आफ्नो स्वाद समुद्री भने, केकडा सलाद पकाउन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसको नाजुक स्वाद जो कोहीले छोड्न हुनेछ indifferent र कुनै पनि उम्दा जीत हुनेछ।
भुईँकटर संग crab सलाद
यो स्वस्थ सलाद तयार, हामी केकडा मासु, दुई, अन्डा, sifted पीठो को आधा कप, दूध-डिब्बे तल्ला क्यान्ड भुईँकटर, एक कागति, प्याज, को marinade एक चमचा (जस्तै सिरका रूपमा), सलाद, जैतून को आधा गिलास को किलोग्राम आवश्यकता हो, सानो टमाटर र खोर्सानी स्वाद, चीनी र नुन।
तयारी: प्याज सूक्ष्मता shinkuem आधा छल्ले, एक कचौरा मा फैलाउन, नुन र चिनी एक चम्मच थप्न र सबै सिरका खन्याउन। राम्ररी मिश्रण र आधा एक घण्टा खटाई मा हालन गर्न छोड्नुहोस्।
अब हामी मासु लागि कुटपिट तयार गर्न आवश्यक छ। एक मिक्सर प्रयोग एक कप मा, दूध, पीठो र अन्डा मिश्रण। rusks र मरिच को एक एकदम बिट एक चमचा थप्न र फेरि whisk। , अन्यथा केकडा सलाद पनि तेज हुनेछ खुर्सानी संग, यो ज्यादा छैन सावधान रहनुहोस्।
portioned टुक्रा मा केकडा मासु कट, कुटपिट मा डूबा र पाप्रो appetizing सम्म दुवै पक्षलाई तेल मा तला।
एक विस्तृत platter मा सलाद, भुईँकटर र मसालेदार प्याज तयार विघटित। पोलेको मासु शीर्ष राख्नु स्लाइस मा, को आधा टमाटर थप्न जैतून र कागति स्लाइस छल्ले।
भर्नको तयार। तेल को आधा कप, तोरी को एक spoonful, balsamic सिरका एक चम्मच, आधा कागति को रस र तिल तेल को एक चम्मच मिश्रण।
केकडा सलाद संग लुगा र तिल को बीउ संग हल्कासित छिडकना।
को सलाद केकडा लाठी र पनीर
खाना पकाउने लागि आवश्यक सामाग्री: केकडा लाठी एक प्याक, पनीर को 100 ग्राम, दुई, अन्डा, लसुन एक ल्वाड़, मेयोनेज।
तयारी: हार्ड उबला अन्डा, चिसो पानी अन्तर्गत सुन्दर जोश।
Crab लाठी फिल्म र सूक्ष्मता अंगीठी छूट दिइएका छन्। दुई लाठी तिनीहरूले भविष्यमा सजिला मा आउन छोड्नु। सूक्ष्मता पनीर र खुली अन्डा RUB।
एक गहिरो कचौरा मा अन्डा, पनीर, केकडा लाठी, मेयोनेज दुई चमचा थप्न लसुन squeezing र राम्ररी मिश्रण राख्नु।
परिणामस्वरूप ठूलो मध्यम आकार को मोती गठन देखि, र केकडा चिप्स मा लुढका। बल एक पकवान मा फैलाउन र ताजा जडीबुटी संग सजाउनु।
सलाद धेरै मूल र सुन्दर दिन्छ।
केकडा लाठी र मशरूम "Maestro" संग सलाद
सामाग्री: केकडा लाठी, डिब्बाबंद मशरूम को एक जार, प्याज, चामल को आधा कप, एक जार को पैक क्यान्ड मकै, को ककडी, तीन, अन्डा, मेयोनेज, वनस्पति तेल, कुनै पनि ताजा साग।
तयारी: अन्डा कडा उसिनेर र साना घन मा कटौती जोश।
Shinkuem आधा छल्ले प्याज। आंकडा धुन र पानी जोश।
Crab लाठी र ककडी घन मा कटौती। खुला मकै र मशरूम, को मशरूम सूक्ष्मता काट्नु सकिन।
मशरूम र प्याज हल्कासित वनस्पति तेल संग एक पैन मा तला।
एक गहिरो कचौरा लिन र तहहरू को उत्पादनहरु फैलाउन, प्रत्येक मेयोनेज संग जो प्रचुर मात्रामा कोट को।
पहिलो तह - आधा पकाएको भात
दोस्रो तह - कटा आधा अन्डा
तेस्रो तह - आधा surimi
चौथो तह - ककडी
पाँचौं तह - तला मशरूम र प्याज
छैटौं तह - फेरि crabsticks
सातौं तह - चित्रा
र अन्तिम पत्र - अन्डा
ताजा हरियो सलाद संग सजाउनु।
यहाँ स्वादिष्ट र लागि व्यञ्जनहरु छन् रोचक सलाद। खानपान!
ईश्वरीय मिठाईहरू "ambrosia": नुस्खा
कसरी पनीर र टमाटर एक सलाद तयार?
ताजा तरकारी: फोटो संग नुस्खा
क्यान्ड गुलाबी सामन एक सलाद तयार
स्पेनी सलाद: मासु, झिंगा, धूम्रपान चिकन र सिमी रिसेपी
'नियो-Penotran' मोमबत्ती। प्रयोगको लागि निर्देशन
अपरेसन "Weiss"। दोस्रो विश्व युद्ध रूपमा
Piper Halliwell: कालो र सेतो जादू को इतिहास मा राम्रो चुडैल छ
यो आगो रोक थाली। Osobennno, प्रकार, आवेदन
सपना व्याख्या: के जंगल सपना
दिन रूसी भाषा दिन: शब्द "टाउको" संग वाक्पद्घति